Muuse Suudi oo uga mahad celiyay Musavani maxmiyad gelinta Soomaaliya. | KEYDMEDIA ONLINE
Muuse Suudi oo uga mahad celiyay Musavani maxmiyad gelinta Soomaaliya.
Muqdisho (Keydmedia) - Muuse Suudi Yelexow, Hogaamiye kooxeed, hore xilligaanna ah taageerayaasha ugu cad cad ee hogamiye kooxeedka Casrigaan, ayaa waxa uu uga mahad celiyay Yugeri Musafani qaabka dalka Soomaaliya maxmiyada loo geliyay.
"Waxaan u mahad celinayaa Yugeeri Musavani, waa nala Shaqeeyay, la'aantii waxba nooma hirgaleen," sidaa muuse Suudi ayaa kayri hoolka baarlamaanka.
Yugeeri Musavani waa ninka soo hindisay in dalka Soomaaliya Gumeysi lageliyo 51 sano kadib oo dalku xur ahaa, waxaana arintaasi oo waayahaan si aad ah loogu ololeynayaay shalay laga ansixiyay baarlamaanka Shariif Xasan.
Sagaalkii bishii tagtay ayaa magaalada kampala waxaa loogu soo dhiibay Shariif Xasan iyo Sharif Axmed liiska maxmiyad gelinta dalka iyaga oo xilligaa wixii ka danbeeyay bilaabay in ay gelinsiiyaan taageerayaashooda gacantu u godantahay ugu danbeynna ay shalay ka ansaxsadeen.